Xiaomi China (Stable) အလုံးတွေမှာ အရမ်းမိုက်တဲ့ Transparent Wallpaper ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ? — Anycall Mobile
By Naw Htoo Aung November 25, 2020 1 Min Read
MIUI 11 မှာ ကတည်းက ပါလာတဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ ဒီ Transparent Wallpaper feature လေးကို သုံးပြီးသွားပြီလား? မသုံးရသေးရင်တော့ စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါဦး။ ဒီ Feature လေးကတော့ Xiaomi ရဲ့Global Version တွေမှာတော့ မရေသေးပါဘူး။
ဒီ Feature လေးကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ မထမဆုံး Theme ထဲ စဝင်ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ ဘယ်ဘက် အောက်ထောင့်မှာရှိတဲ့ My Acccount ထဲ ဝင်ပေးရပါမယ်။
ပြီးရင်တော့ Theme Lab ထဲက Transparent Wallpaper ထဲ ဝင်ပေးရပါမယ်။
ပြီးရင်တော့ Transparent Wallpaper ထဲမှာရှိတဲ့ Off နေတဲ့ Use Transparent Wallpaper ကို On ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ Go To Theme ထဲ ထပ်ဝင်ပေးရပါမယ်။
Theme ထဲရောက်ရင်တော့ ကိုယ်ထားချင်တဲ့ Wallpaper ကို Apply နှိပ်ပြီးရွေးပေးလိုက်ပါ။ ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Set as Transparent Wallpaper ကို ထပ်ရွေးပေးရပါမယ်။ “Applied Successfully“ လို့ ပေါ်လာရင်တော့ ရသွားပါပြီ။
ဒီအဆင့်လေးတွေ ပြီးသွားရင်တော့ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ App တွေကို ဖွင့်ပေးဖို့အတွက် အပေါ်မှာလုပ်ခဲ့အတိုင်း Themes >> My Account >> Theme Lab >> Transparent Wallpaper ထဲမှာရှိတဲ့ “Select apps that should work with transparent wallpapers” ကို ဝင်ပေးပြီး ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ App တွေကို ဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။
ဒါပြီးရင်တော့ အဲ့အောက်မှာ Opacity Level ရှိပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကိုတော့ ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ အဆင်ပြေသလောက် အလင်းအမှောင်ချိန်လို့ရပါတယ်။
Wallpaper အတွက်ကိုတော့ MIUI Theme ထဲက Wallpaper တင်မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့် Gallery ထဲမှာရှိတဲ့ ဘယ်ပုံမဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကိုယ့် Gallery ထဲကပုံတွေ သုံးလို့ရတာကလည်း တော်တော်အဆင်ပြေစေပါတယ်။
iPhone, iPad တွေမှာ မှားဖျက်မိလိုက်တဲ့ Note တွေကို Recover ဘယ်လို လုပ်မလဲ?
US က Xiaomi ကို Ban လိုက်ခြင်းက ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်လဲ?
Android ဖုန်းတွေရဲ့ ဘယ် Application တွေက ကိုယ့် Location ကို သုံးနေလဲ?
ROG Phone4ရဲ့ အငွေ့အသက်လေးတွေစထွက်လာပြီ
အသစ်ထွက်လာတဲ့ S21 Series 5G မှာ ဘာ‌ေတွမျှော်လင့်လို့ရမလဲ???